I-China 40Khz ye-Ultrasonic yeNano Spray Isixhobo esineFrithi yokuPhindaphinda rhoqo seRhoqo esiPhezulu seNdawo esiBini sokuSebenzisa ukuTshiza kunye neFektri | Qianrong
I-40Khz ye-Ultrasonic yeNano Spray Isixhobo esineFrithi yokuBekwa kweRhafu ePhindwe ngokuQhelekileyo yokuKhwela kweFlu
Ukutshiza kwe-nano ye-40K yitekhnoloji yokutshiza eyahlukileyo, eyindlela yokutshiza esekwe kwitekhnoloji ye-atomizing yomlomo. Xa kuthelekiswa nokutshiza kwesintu okunamanzi okubini, ukutshiza okuphuculweyo kwe-atomized kunokufezekisa ukufana okungcono, ukutyeba okuthe tye kunye nokuchaneka okuphezulu. Kwangelo xesha, ngenxa yokuba umbhobho wokutshiza we-ultrasonic unokwenziwa nge-atomized ngaphandle koncedo lomoya, ukusetyenziswa kwe-ultrasonic ukutshiza kunokunciphisa kakhulu ukutshiza kwepeyinti ngexesha lokutshiza, kwaye uqonde injongo yokonga ipeyinti. Ireyithi yokusetyenziswa kokutshiza kwe-ultrasonic kungaphezulu kwamaxesha ama-4 okutshiza ngokwesiko kolwelo-mabini.
Umsebenzi wemilomo eyi-Ultrasonic ngemilomo ngokuguqula amaza esandi esiphakamileyo abe ngamandla oomatshini, kwaye amandla oomatshini ahanjiswa kulwelo ukwenza amaza amileyo. Ulwelo yaziswa umphezulu atomization ngemilomo eyi. Xa ulwelo lushiya umphezulu womlomo wombhobho, wophulwe waba yinkungu entle yamachaphaza afanayo e-micron, ngaloo ndlela kufezekiswa i-atomization.
Umbhobho we-atomizing we-ultrasonic wenziwe ngamandla e-titanium alloy kunye nezinye izinyithi zobunini, eziwunika ukumelana kakuhle kweekhemikhali kunye neempawu ezintle ze-acoustic. I-electroactive element iqulethwe kwindlu etywiniweyo ekhusela inxenye yemilomo engcoliseko lwangaphandle.
Egqithileyo I-Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology yeTin Powder nguRhoqo oPhezulu oPhezulu
Okulandelayo: I-Ultrasonic transducer i-Impedance analyzer yokulinganisa isixhobo seParameter
I-Ultrasonic Core yeziXhobo zokuqhuba iTransducer 3 ...
I-60Khz 150W ye-Ultrasonic yeWelding Transducer yeCo ...
Ukuphindaphindwa okuphezulu kweVibration ye-Ultrasonic yokusika iMac ...